Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseSpain Jordi Alba Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza indaba egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso; "I-Moto GP". Indaba yethu ye-Jordi Alba yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ebuntwaneni kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye namaqiniso amaningi angaziwa nge-OFF-Pitch.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ukuhlasela okusheshayo kushiya emuva ngejubane nokuqina. Kodwa-ke, abalandeli abambalwa kuphela abawazi okuningi nge-Bio Jordi Alba okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
UJordi Alba Ingane Yokufunda Ingane Plus Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
UJordi Alba Ramos wazalwa ngosuku lwe-21s ka-Mashi 1989 e-L'Hospitalet, eSpain. Wazalwa esigabeni samaCatalan kunina, uMaria Jose nobaba, u-Alba Miguel.
Ukuzalwa nokwakhiwa komasipala wesibili ngobukhulu eBarcelona kwakusho ithuba elihle lokuthatha ibhola njengendlela yokuzilibazisa ngenxa yedolobha elaziwa kakhulu ngebhola kunoma yini enye. UJordi omncane wakhula edlala ibhola nomfowabo uDavid Alba endaweni yase-Barcelona e-L'Hospitalet.
Njengoba ekhula, waba nemfundo yakhe yasekuseni e-Barcelona school Spanish eyamnika ithuba ngidlale ngentshiseko ibhola lomncintiswano phakathi nesikhathi sezemidlalo. Lapho eneminyaka eyi-7 ngonyaka ka-1996, umndeni kaJordi Alba wanquma ukwenza indodana yabo ithathe ibhola njengemisebenzi. Ngalolo nyaka, u-Jordi Alba omncane waqala uhambo lwakhe lokudlala ibhola ne-Catalonia yaseBatalonia Hospital Hospital. Wabonwa njengomncinyane kunazo zonke, unesibindi nomphathi weqembu lakhe njengoba beqaphele ngezansi.
Ukuba nesiko esivamile sokuvumela abadlali babo abahamba phambili baye eLe Masia (FC Barcelona Youth football club), i-Hospitalense ayikwazi ukungabaza ukuvumela ukuba umdlali wabo wezinkanyezi abe yinhloko yokuhlolwa. UJordi Alba waya eLemasia football academy ngezethemba eligcwele. Naphezu kokuncane kakhulu okwakungumkhawulo, uJordi wabonisa ukuhamba okuhamba phambili okuzama ukuba umphathi wezinsizwa amamukele ngethemba lokuthi uzokhula kakhulu eminyakeni ezayo.
U-Alba empeleni wayesebenza ezinkampanini zentsha yaseBarcelona njenge-winger kwesokunxele. Wajabulela izikhathi zakuqala kuleli qembu. Omunye womzuzu wakhe ongakhohlwayo uhilela ukuba adle ukudlala nomqeqeshi weqembu lase FC Barcelona, ULouis Van Gaal. Njengoba kuboniswe esithombeni esingezansi, bobabili bahlezi etafuleni bexoxa ngokuhle kakhulu kukaJordi ekudlaleni kwebhola.
UJordi Alba Ingane Yokufunda Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukubhekana Nobunzima Nokuphakama Ekudumeni
Ukuba nesilinganiso esiphakeme sokuthuthukiswa nokuhlangana ULouis Van Gaal akuqinisekisi ukuthandaza esikoleni se-Le Masia eBarcelona. UJordi Alba wayenenkinga eyodwa enkulu. Ukuthi wayengumuntu "Encane kakhulu". Ngesikhathi abadlali beqembu lakhe bekhula bebadala kakhulu, uJordi ompofu wahlukumezeka kakhulu. Lokhu kwabangela izingxabano ezinzima phakathi nokuphathwa kweBarça Infantil B ngisho nawe Lionel Messi wayexolelwe. Ku-2005, iBarcelona yakhipha uJordi Alba ngokubheka "Encane futhi encane". Babengazi ukuthi uzovela emnyakeni wezwe weFIFA 5 eminyakeni edlule. Kuyafaneleka ukuphawula lokho UJamie Vardy wabhekana nesimo esifanayo njengomfana webhola lebhola.
Ngenxa yokugqugquzelwa kwabazali bakhe nomfowabo omdala, uJordi omncane waqhubeka. Wamukelwa yiqembu lakhe laseCommellà. UJordi Alba wathola isisusa ekuhluphekeni kwakhe futhi wathola induduzo nabalingani bakhe. Ukudla okuvamile kwama-supplement ukukhula kwakuhlanganiswe ne-barrage yokubonisa okusheshayo okusheshayo. Ekugcineni ukukhula okuhambisana nesikhathi uJordi athole isiteketiso "MotoGP"
Ngemuva kweminyaka emibili eyamenza ekhule, FC Valencia yanquma ukukhokha ngakwesobunxele emuva kwemali engu-€ 6,000. KwakuseValencia Jordi Alba ekugcineni eseqedile umsebenzi wakhe osemusha ngemuva kokusiza iqembu lakhe lentsha ukuthi likhuthazwe eTercera Division.
U-Alba wenza i-debut yakhe yobuchwepheshe esikhathini se-2008 / 2009. Ukusebenza kwakhe okuvelele kweNdebe yoMhlaba ye-2010 FIFA kudonsele umdlali ku FC Barcelona owaqala ukucela isihe nokuthethelelwa. UJordi Alba uxolele iqembu lakhe elidala futhi wajoyina ku-2012. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
UJordi Alba Ingane Yokufunda Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ibhola liyisihlahla segolide, indawo lapho u-Jordi Alba ebusheni bakhe ethola khona umthunzi futhi induduzo ngokwenza kanjalo abe umuntu omkhulu. Manje, bNgalesi sikhulu esingumSpanishi kwafika izinqola ezazingena amehlo enhliziyweni yakhe.
Ukuqala, Jordi Alba ku-2009 (unyaka wangena eqenjini le-U20 laseSpain) waqala ubuhlobo nomngane wakhe osekuqaleni uMellisa Morilas. UMelissa owachitha iminyaka yokugcina ye-3 nomdlali webhola lezinyawo ungumfundi futhi bahlangana e-nightclub ethandwayo yaseValencia.
Intombazane yaseSpanishi enhle kakhulu yagcina uJordi ecindezelekile futhi engaboni ukukhanya kwamanye amavili. Lokhu kusho ukuthi wayeyithandana nomhawu. UJordi uphinde waveze ukuthi unezinkinga ezimbi futhi wamphatha njengokungathi wayeyingane njengoba kubonwe esithombeni esingezansi.
UMellisa usho njalo ukuthi ubona uJordi enamandla "Ukuthobeka nokuthanda kakhulu ABANTU". Uke wabonakalisa umcibisholo waseSpain ukuthi isoka lakhe likhona "Ngaso sonke isikhathi ku-Surveillance futhi ku-Bed Bed". Ukuqapha okuqhubekayo kukaMelisa njengoba isikhathi siqhubeka akuzange kuhlahle kahle noJordi Alba. Lokhu kwaholela ekupheleni kobudlelwane babo obuhlala iminyaka emine.
Ngo-2014, unyaka weNdebe yoMhlaba yeFIFA, uJordi waqala ukuthandana noRomrey Ventura. Babonwa ndawonye ngaphambi kwe-2014 kodwa bekunqatshelwe ukuthi banezinkinga.
U-Romarey uvela eSevilla. Wayesengumfundi wezokuvakasha eyunivesithi futhi uhilelekile ekufaniseni. Lo mbhangqwana wabelane ngezithombe eziningana ndawonye (izithombe eziphawulekayo zasebhishi) esikhathini esithile emuva ngenkathi behlelwe ngamahemuhemu ukuba baqomane.
Ngaphezu kwalokho, uRomreyrey Ventura unobungane obuhle nodadewabo ka-Alba emthethweni (umkaDavid).
Esikhathini esithile emuva, bobabili uJordi noRomrey bafuna ukukhombisa injabulo yabo kubalandeli. Njengoba ngo-Agasti 2017, uRomreyrey Ventura ukhulelwe ingane yabo yokuqala. Ubeke isithombe ku-Instagram no-Alba kuso lapho ethinta isisu sakhe. "Egcwele uthando oluningi" wabhala.
Abazali baka-Alba kumele bajabule ngoba umfowabo uDavid naye ulindele ingane nomlingani wakhe uCarol ngesikhathi esifanayo. "Kubonakala kokubili kuhlelwe"
UJordi noRomrey babe nendodana yabo yokuqala uPiero ngo-18th kaJanuwari 2018.
UJordi Alba Ingane Yokufunda Ingane Plus Untold Biography Facts -Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Esikhathini sokuxoxwa kukaJordi Alba noMnin Deportivo, ukubuyela emuva kwadingeka futhi ukuphendula imibuzo mayelana nokuphila kwakhe. Ngokwesibonelo…U-Alba uvuma ukuthi ulele amahora angu-12 ngosuku!. Ngezansi kukhona ama-Q alandelayo no-A.
Q: Yini Okuphila Kwakho Okujwayelekile ku-Hospitalet?
UJordi Alba Uphendula: "Ngiphila lapho, ngaya e-cinema, ezitolo zokuthenga noma emishayweni. Ngiphinde ngaya enkundleni yemidlalo "Joventut", lapho umama wami othando enza khona ".
Q: Ingabe ungum fan we-Chess?
UJordi Alba Uphendula: "Ngiyakuthanda ukudlala futhi ngiqhubeka ngenza nobaba. Kungenza ngicabange futhi yingakho ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi i-chess ifundiswa ezikoleni ".
Q: Ingabe ngempela ulala amahora we-12?
UJordi Alba Uphendula: "Ngingalala amahora angu-12 noma ama-13. Ebusuku ngiyakwenza kusukela ku-12am kuya ku-9am futhi nginama-2,3 noma amahora angu-4 emini "
Q: Ingabe u-Salad uhlanya?
UJordi Alba uphendula: "Isaladi ingishaya imimoya. Ngiyidla ngesidlo sasemini futhi sidle ... Angikwazi ukudla kwasekuseni kodwa ngiyajabula ngesaladi, inkukhu nezinye irayisi. Ngiphuza mayelana namalitha angu-3 ngosuku ".
Q: Ungum Fan of Music, mhlawumbe uKevin Roldan?
UJordi Alba Uphendula: "Ngithanda i-rumba ne" flamenco ". Kevin Roldan? Angazi ukuthi ubani "
Q: Uyathanda iThelevishini?
UJordi Alba Uphendula: "Ngiyathanda umbukiso we-TV we-Spanish" La que se neina ". Ngiyakwazi ukubuka isiqephu esifanayo izikhathi ezinhlanu futhi ngilokhu ngihleka ".
Ekugcineni, kuJordi Alba Personal Life, kuthiwa ungummeli weBraun futhi ukhuthaza imikhiqizo. Unayo izimoto eziningana zokunethezeka ezihlanganisa i-Audi.
UJordi Alba Ingane Yokufunda Ingane Plus Untold Biography Facts -Imiklomelo yomuntu ngamunye
U-Alba unqobe iziqu eziningana zasekhaya nasezizweni zonke. Ngaphambi kwesikhathi se-2017 / 2018, uye wasiza i FC FC ukuba izuze iLa Liga neCopa del Rey izikhathi ezine. Uthole i-Supercopa de España kabili neNdebe Yezwe YeFIFA kwi-2015. Ngokunye neBarcelona, ​​wazuza kokubili i-UEFA Champions League ne-UEFA Super Cup ku-2015. Ngaphandle kokuphumelela kweqembu lakhe, wathola imiklomelo eminingana yamanje kuze kube manje. Eminye imiklomelo ephawulekayo phakathi kwabo ingokulandelayo:
I-UEFA Euro Team ye-Tournament: 2012
I-FIFPro World XI: Ithimba Lesibili , Ithimba Lesithathu [2013, 2014 ne-2016]
I-Liga: Ithimba leNkathi [2014-15]
UJordi Alba Ingane Yokufunda Ingane Plus Untold Biography Facts -Isitayela se-Play
U-Alba ungumuntu ohlakaniphile kakhulu futhi onesivinini esishayela emuva futhi ongasetshenziswa njengesilingo sesokunxele. Ukuhamba kwakhe nokuqina kwakhe kuvumela ukuba ahileleke kakhulu kokubili ukwephula nokuzivikela ngoba angathola kusukela ekupheleni komkhawulo kuya kwesinye ngokushesha.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Jordi Alba Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.